Best Graphical Backup Zvishandiso zveLinux | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura ndakakuratidza mamwe matipi uye manomano ekuti utakure yakanaka kuchengetedzeka mutemo. backup kopi. Mune ino imwe nyaya iwe uchaona rondedzero ine mamwe akanakisa ekushandisa ekushandisa, asi iwo akavakirwa pane GUI. Ndokunge, kuti iwe ugone kuishandisa kubva ku graphical mushandisi interface pasina kufanira kuvimba neiyo terminal.
Kune maWindows anoshanda masystem pane akawanda mafomu akadaro, yakawanda yeiyi software ndeyekuchengetedza. Zvisinei, Kugoverwa kweGNU / Linux ivo havasi kumashure kumashure, uye kune huwandu hwesimba rakanyanyisa, yakapusa, uye yemahara yemahara maficha, kuwedzera pakuve yakavhurika sosi ...
Pano une sarudzo ne maturusi akanakisa ekuchengetedza ine graphical interface yeLinux:
Déjà Dup- Yakasimba kwazvo yakavhurwa sosi application kuti ugone kugadzira backup makopi. Nayo unogona kusarudza kuti ndeapi madhairekitori aunoda kuteedzera, iko kuenda kwemakopi aya (enzvimbo kana mugore paGoogle Drive), inobvumira kunyorera, kumanikidza uye nekukurumidza. Inotsigira makopi akazara kana ekuwedzera, pamwe nekurongedza otomatiki.
Grsync: Chokwadi unoziva rsync, chishandiso chekuchengetedza chakavakirwa pane mameseji modhi. Zvakanaka, iyi ihanzvadzi yayo ine graphical interface, kuti zvinhu zvive nyore kwauri uye kuti ikope nekukurumidza uye nyore. Seizvo zita rayo rinoratidzira, iwe uchakwanisa kuenderana madhairekitori,
Timeshift-Iine simba rakavhurika sosi sisitimu yekuchengetedza uye yekudzosera chishandiso chinoda zvishoma kugadzirisa Uye zvakare, yayo graphical interface yakachena kwazvo uye inonzwisisika.
Kudzoka Munguva: Imwe yakavhurwa sosi yekushandisa yeLinux uye yakavakirwa paQt5 GUI, kunyangwe ichikwanisa kumhanya munzvimbo dzakasiyana dze desktop pasina dambudziko. Iyo graphical mutengi yeiyo backintime yekuraira mutsara zvinoshandiswa.
UrBackup: imwe nzira, zvakare yakavhurwa sosi, ndeiyi. Icho chishandiso, chiri nyore chishandiso chekuti makopi ako ekuchengetedza agadzirire. Kunyangwe iine muganho wakakura, uye izvo ndezvekuti zvinongoshanda chete neNTFS
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU / Linux » Sisitimu Yekutonga » Yakanakisa graphical backup apps yeLinux